Taliyaha CXD oo Tababar u furay cutubyo ka tirsan Ciidanka Ururka 60-Aad ee Ilaalada Madaxtoyada Qaranka | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Taliyaha CXD oo Tababar u furay cutubyo ka tirsan Ciidanka Ururka 60-Aad...
Taliyaha CXD oo Tababar u furay cutubyo ka tirsan Ciidanka Ururka 60-Aad ee Ilaalada Madaxtoyada Qaranka
Muqdisho(SNTV):–Taliyaha ciidanka xoogga dalka General C/wali Xuseen jaamac Gorod oo ay wehliyaan Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka ayaa tababar u furay cutubyo ka tirsan Ciidanka ururka 60Aad xooggga dalka.
Tababarka loo furay Ciidanka Ururka 60-Aad ee ilaalada Madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu socon doonaa Mudo Saddax bilood.
Ugu horeeynti waxaa munaasabada furitaanka tababarka ka hadlay G/dhaxe Odowaa yuusuf Raage oo ah Taliyaha ururka 60Aad ee ilaalada madaxtoyada soomaaliya waxa uuna ciidamada maanta tababarka loo furay ugu baaqay in ay ka faaiideestaan muda uu socdo tababarka iyo waxyaabaha lagu bari doono
“MudaneTaliye waxaa halkaan taagan in ka badan 100 Askari oo ka tirsan ururka 60Aad ee ilaalada Madaxtooyada Qaranka. Ciidamadan waxaa laga rabaa in ay ka faa’iidestaan tababarka lasiin doono”
Taliyaha ciidanka xoogga dalka General C/wali Xuseen jaamac Gorod oo tababarkan si rasmi ah u furay ayaa Ciidamada kula daar-daarmay in ay ka faa’ideystaan Fursadan ay haleen, islamarkaana ay u hogaansamaan sharaakiisha bixineysa Tababarkan.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka S/gaas C/wali jaamac Xuseen ayaa dhanka kale Ciidamada xoogga dalka ugu digay in xiliyada shaqada lagu guda jiro ay isticmaalaan Muqaadaraadka.
Previous articleTelefishinka Qaranka Itoobiya oo xaqiijiyey Qarax Addis Ababa ka dhacay
Next articleDuqa Muqdisho oo la kulmay Darawada Gaadiidka Dadweynaha ee BL-ka iyo Bajaajta
DAAWO SAWIRRADA BEERTA NABADDA
Madaxweyne Farmaajo oo kulan doceed la qaatay dhiggiisa Dalka Uganda “SAWIRRO”
Duqa Muqdisho oo lacag ku wareejiyay shirkad qaabilsan dhismaha waddada Jaale Siyaad “SAWIRRO”
Duqa Muqdisho oo lacag ku wareejiyay shirkad qaabilsan dhismaha waddada Jaale...